You are here: Home Upcoming Events ဝန်ထမ်းကောင်းများ မဆုံးရှုံးစေချင်
ကျွန်တော့်အသက်က ဆယ်စုနှစ် ငါးခုနီးပါးရောက်လာပြီဖြစ်သည်။ ဖြတ်သန်းလာခဲ့ရသည့် ဘဝ တစ်လျှောက်လုံးတွင်လည်း ဘဝမျိုးစုံကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရဖူးပါသည်။အဆုံးဆုံးဆိုတာတွေကိုလည်း ရင်ဆိုင်ခဲ့ ဘူးသလို အကောင်းဆုံးဆိုတာတွေကိုလည်း ခံစားခဲ့ရဖူးပါသည်။ ဤအတွေ့အကြုံများသည် ငွေပေး ဝယ်ယူ၍ မရနိုင်ခဲ့သည့် အဖိုးအနဂ ထိုက်တန်သည့်ဘဝ သင်ခန်းစာများဟုပင် ဆိုနိုင်ပါသည်။ အရပ်စကားပြောရလျှင် ရှင်ကြီးဝမ်းလည်း ဝင်ခဲ့ဖူးသည်၊ ရှင်ငယ်ဝမ်းလည်းဝင်ခဲ့ဖူးသည် ဟုဆိုရပါမည်။ ငယ်စဉ်အခါ အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်မှ ယနေ့ထက်ထိတိုင် မိမိခြေထောက်ပေါ် ရပ်တည်နိုင်အောင် ကြိုးစားခဲ့ရသည်။ အလုပ်မျိုးစုံ လုပ်ခဲ့ရသည်။ တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များစွာ၏ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်အဖြစ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုခဲ့ဖူးသလို
နိုင်ငံခြားသားများ၏ လက်အောက်တွင်လည်း ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်အဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့ဖူးပါသည်။ ‘ဒါတင်မကပါ အစိုးရဝန်ထမ်းတစ်ဦးအနေဖြင့်လည်း ဝန်ကြီးဌာန ၄ ခုတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးပါသည်။ ထိုသို့ အမျိုးမျိုးအထွေထွေ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသလို ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း ဈေးသည်မှ စကာ ကန်ထရိုက်အထိ လုပ်ခဲ့ဘူးသဖြင့် လောကကြီးအကြောင်း ၊ လူတွေအကြောင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေ အကြောင်း၊ အလုပ်သမားလူတန်းစားတွေအကြောင်း စသည်စသည်ဖြင့် တော်တော်လေး နောကျေခဲ့ သည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် ဘဝသင်ခန်းစာများသည် ဆိုးတစ်ခါ ကောင်းတစ်လှည့် ဖြစ်ခဲ့သဖြင့် ဆိုးရွားသည့်အခြေအနေကိုလည်း ရဲရဲရင့်ရင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသလို သာလွန်ကောင်းမြတ်သည့် ဘဝအထွေထွေကိုလည်း ခံစားခဲ့ရပါသည်။ အထူးသဖြင့် အချိန်တော်တော်များများရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည့် ဘဝအခြေအနေမှာ ဝန်ထမ်းတစ်ဦး၏ ဘဝအခြေအနေပင်ဖြစ်ပါသည်။
'To buildasuccessful small business, everyone needs to pull in the same direction''
သေးငယ်သည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေး တစ်ခုပင်ဖြစ်စေကာမူ အောင်မြင်တိုးတက်ရန်အတွက် ရှိသည့်ဝန်ထမ်းများအားလုံးက တက်ညီလက်ညီဖြင့် ရည်မှန်းချက်တစ်ခုတည်းကို အောင်မြင်အောင် ကြိုးစားလျှောက်လှမ်းဖို့လိုအပ်ပါသည်။ ဝန်ထမ်းများသည် ဟန်ချက်ညီညီ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ရမည့် မောင်းနှင်အားပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုမောင်းနှင်အားကို ဟန်ချက်ညီညီ မောင်းနှင်နိုင်စေရန် ပါဝါခေါ် အင်အားများ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများ ဖန်တီးပေးရပါမည်။ တကယ်တော့ ဝန်ထမ်းဟူသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံး၏ အောင်မြင်မှုအသီးအပွင့်များကို ဖန်တီးပေးသည့် ပင်စည် ရေသောက်မြစ်နှင့် အကိုင်းအလက်များဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတွင် စွမ်းရည်မရှိသူဝန်ထမ်းများသာရှိပါက အနှီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည် အောင်မြင်ဖို့လမ်းစမြင်ဘဲ အမှားများ ဆုံးရှုံးမှုများကိုသာ ရင်ဆိုင်ရမည်မှာ ဓမ္မတာပင်ဖြစ်ပါသည်။ ပျော်ရွှင်တက်ကြွပြီး အရည်အချင်းရှိသော ဝန်ထမ်းများသည် ပျော်ရွှင်ကျေနပ်စေသည့် ဖောက်သည်များကိုသာ ဖန်တီးရှာဖွေတတ်ကြပါသည်။ The Week Business စာစောင်တွင် ဝန်ထမ်းကောင်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး အောက်ပါအတိုင်း ရေးသားထားပါသည်။
It'sabusiness no-brainer, yet so many get it wrong. The sure-fire way to get happy customers is to have happy staff. Conversely, the fastest way to lose them is to have dispirited employees who deliver poor service. Just one bad interaction withademotivated team member is enough foraclient never to return, and worse, tell everyone about the experience. Word-of-mouth advertising can be one of the most valuable assetsabusiness has, but if it turns negative it can beanail in the coffin forastart-up.For this reason it is essential foragrowing business to keep staff enthusiastic, motivated and genuinely evangelical about the company.
စိတ်ဓာတ်ကျနေသော ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် ကောင်းမွန်သော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုကို ပြည့်ပြည့်ဝဝ ဖန်တီးလုပ်ဆောင်နိုင်မည် မဟုတ်ချေ။ စိတ်မပါသော၊ညံ့ဖျင်းသော ဝန်ဆောင်မှုကြောင့် မိမိ၏ ဖောက်သည်တစ်ဦးဆုံးရှုံးသွားနိုင်သကဲ့သို့ ယင်းဖောက်သည်၏ပြန်မလာဇာတ်လမ်းသည် အခြားဖောက်သည်များကိုပါ ကူးစက်စေပြီး ဖေါက်သည်ပြန်မလာဇာတ်လမ်းကြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံးကို ထိခိုက်စေမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်ငယ်စဉ်က ဂဝံမြေကြီးကန်ထရိုက်တစ်ဦးလုပ်ခဲ့ဖူးပါသည်။ ဂဝံမြေများကိုဝယ်ယူပြီး ဝန်ထမ်းများရှေ့တွင် မားမားရပ်လျက် မိမိ၏ လက်များပေါက်သည်အထိ ဂဝံတုံးများကို ကိုယ်တိုင်တူးပြပါသည်။ ကိုယ်တိုင်သယ်ပိုးပါသည်။ ထိုအခါဝန်ထမ်းများကလည်း တက်ကြွစွာ လုပ်ဆောင်လာသည်။ အင်တိုက် အားတိုက်လုပ်ဆောင်သော ဝန်ထမ်းများကို လုပ်အားခနှင့်အစားအသောက်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်ဆည်းပေးလိုက်သည်။ ဝန်ထမ်းများက အလုပ်ကြမ်းသမားများဖြစ်ကြသည်။ သို့သော် သူတို့၏ မိသားစုများစားဝတ်နေ ရေးပြေလည်လာကြသည်။ လုပ်ငန်းခွင်တွင် ပျော်လာကြပါသည်။ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမား စိတ်ဓါတ်မရှိတော့ဘဲ မိသားစုပုံစံဖြစ်လာကြပါသည်။ နောက်ဆုံး ကျွန်တော့် အတွက်ဆိုလျှင် အသက်ပင်ပေး၍ ကာကွယ်မည်ဟု ဆိုလာကြပါသည်။ ဒါသည် အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမား စိတ်ဓါတ် မခွဲခြားခြင်းကြောင့်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။
ဒါဆိုလျှင် ဝန်ထမ်းကောင်းတွေကို ဘယ်လိုမွေးထုတ်ကြမလဲဆိုသည့် မေးခွန်းက မေးစရာဖြစ်လာပါသည်။ ဝန်ထမ်းကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ရာ အဓိကကျသူမှာ ထိုဝန်ထမ်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်သည် ရေလောင်းပေးသည့် ဥယျာဉ်မှူးသာဖြစ်ပါသည်။ ဝန်ထမ်းကိုယ်တိုင်က ကြိုးစားမှု ၊ ရိုးသားမှု၊ နိုးကြားတက်ကြွရှိဖို့လိုအပ်ပါသည်။ ထိုသို့ ရိုးသား၊ ကြိုးစား၊ နိုးကြားတက်ကြွသော ဝန်ထမ်းကို ရေလောင်းပေါင်းသင်မှုမပြုခြင်း၊ တစ်စုံတစ်ရာ မြေထောင်မြှောက်ပံ့ပိုးပေးမှု မရှိခြင်း၊ အရေးတယူဆက်ဆံမှုမပြုခြင်း၊ ချီးမြှင့်မြှောက်စားမှုမပြုခြင်းသည် ထိုဝန်ထမ်း၏ သိစိတ်၊ မသိစိတ်နှစ်မျိုးစလုံးကို ညစ်ထေးပျက်စီးစေပါသည်။ ဝန်ထမ်းအချင်းချင်းသွေးကွဲစေသော အဓိကအချက်သည် ပိုင်ရှင်(သို့မဟုတ်)သူဌေးဖြစ်သူက နီးစပ်ရာဝန်ထမ်းများကို ချီးမြှင့်ပြီး ကျန်ဝန်ထမ်းများကို ဥပေက္ခာပြုထားခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွင်း ဝန်ထမ်းများစည်းလုံးမှုရှိစေရန်၊ ကြိုးစားမှုရှိစေရန် သာတူညီမျှသော ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများဖန်တီးပေးခြင်းဖြင့် ဝန်ထမ်းကောင်းများကို ထာဝရ လက်တွဲနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
--------------------------------------------------------------- ဝန်ထမ်းကောင်းတစ်ယောက် အောင်မြင်သော၊တိုးတက်သောဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဖြစ်လာရန် အောက်ပါအချက်များသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအချက်များပင်ဖြစ်ပါသည်။
(၁) ကျွမ်းကျင်မှုရှိအောင်လုပ်ပါ၊ မိမိအလုပ်ကိုလေ့လာပါ၊ အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါ။ (Behave Professionally, Learn to do your Job and do it well )
မိမိတာဝန်ယူလုပ်ဆောင်ရမည့်အပိုင်းကို အထူးတလည်တတ်ကျွမ်းနားလည်ဖို့လွန်စွာ အရေးကြီးပါသည်။ တတ်ယောင်ကားလုပ်ဆောင်ခြင်းသည် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုဖြစ်စေသည်သာမက မှားယွင်းဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ မတတ်သေးပါက တတ်အောင်သင်ကြားပြီးမှ တာဝန်ယူခြင်းသည် အမြန်ဆုံးနှင့်မှန်ကန်စွာရည်မှန်းချက်ကို ရောက်ရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အကောင်းဆုံးသော အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်မှုသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ တတ်ပြီးပါကလည်း ပိုမိုပြီး သိအောင်ကြိုးစားရန်လိုအပ်ပါသည်။ မည်သည့်ပညာမှ ဆုံးခန်းတိုင်သည်ဟူ၍ မရှိသေးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
(၂) မိမိ၏အဖွဲ့အစည်းအတွင်းရှိလုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်များနှင့် ခင်မင်ရင်းနှီးစွာပေါင်းသင်းနိုင်သည့်စိတ်ဓါတ် မွေးမြူပါ။ (Cultivate good relationships with the people in your organization.)
အဖွဲ့အစည်း(သို့) စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင် တစ်ဦးတစ်ယောက်ကောင်းဖြင့် အောင်မြင်နိုင်မှု အလွန်နည်းပါးပါသည်။ အောင်မြင်မှုတော်တော်များများသည် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများဖြင့်သာ ရရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့သို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးဖြင့် တာဝန်ခွဲဝေလုပ်ကိုင်ခြင်းကြောင့်သာ အောင်မြင်မှု၏ အသီးအပွင့်ကို ခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့် ဝန်ထမ်းကောင်းတစ်ဦးသည် ဆက်ဆံရေးအပိုင်းတွင်လည်း အထူးဂရုပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။ မိမိ၏လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြသူများအားလုံးနှင့် လိုက်လျောညီထွေ ခင်မင်ရင်းနှီးစွာပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်ပျော်ရွှင်မှုသာမက အောင်မြင်မှုကိုပါ ဆွတ်ခူးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
(၃)ပညာရပ်အသစ်များသင်ကြားရန်အခွင့်အရေးရပါက မတူကွဲပြားသောလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် လေ့လာသင်ယူပါ။ (When you get the opportunity to learnanew skill, receive training foradifferent activity.)
တစ်ခါတစ်ရံတွင် မိမိကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်သောလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်နေရသော်လည်း မိမိ၏လုပ်ငန်းနှင့် မသက်ဆိုင်သော အခြားပညာရပ်ဆိုင်ရာများကို သင်ကြားရန်အခွင့်အရေးရလာပါက မိမိနှင့်မဆိုင်ဟု သဘောမထားဘဲ လုပ်ငန်းခွင်ထိခိုက်ခြင်းမရှိပါက အဆိုပါပညာရပ်ကို လေ့လာသင်ကြားထားသင့်ပါသည်။ ယင်းသို့လေ့လာသင်ကြားတတ်မြောက်ထားသော ပညာရပ်အသစ်သည် တစ်ချိန်ချိန်တွင် မိမိအတွက် ကောင်းမွန်သောအခွင့်အလမ်းတစ်ခုကို ဖြစ်လာစေနိုင်ပါသည်။
(၄) ပြစ်ချက်မရှိသောလုပ်ငန်းခွင်မှတ်တမ်းရရှိအောင်ထိန်းသိမ်းလုပ်ဆောင်ပါ။ (Maintainaclean track record.)
ဝန်ထမ်းတစ်ဦး၏အရည်အချင်းနှင့် အရည်အသွေးကို ဝန်ထမ်းရေးရာဖိုင်များဖြင့် မှတ်တမ်း တင်ကြပါသည်။ ထိုမှတ်တမ်းများကိုကြည့်ပြီး အထက်အဆင့်သို့တာဝန်ပေးမှုကို စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ကြသဖြင့် အောင်မြင်သောဝန်ထမ်းကောင်းတစ်ဦးဖြစ်ရန်မှာ ဝန်ထမ်းရေးရာဖိုင်တွင် မင်နီမရှိစေရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို မှန်ကန်စွာလိုက်နာခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ မိမိလုပ်ကိုင်သော လုပ်ငန်းအပေါ် စေတနာထားပြီး ဂရုတစိုက်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း ဝန်ထမ်းရေးရာဖိုင်တွင် အပစ်အနာအဆာကင်းပြီး မင်နီကင်းဝေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
(၅)ပဟေဠိများကို အဖြေထုတ်နိုင်သူဖြစ်ပါစေ။ (Be part of the solutions.)
မည်သည့်လုပ်ငန်းမဆို ပြဿနာ အနည်းနှင့်အများကြုံတွေ့ကြရပါသည်။ ပဟေဠိပုစ္ဆာများ ကို ဝန်ထမ်းကောင်းများ မန်နေဂျာများက ဖြေရှင်းပေးကြရပါသည်။တခါတရံတွင် ဖေါက်သည်စောဒတက်ခြင်းများကို ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံရသည့်အခါမျိုးတွင် ပညာသားပါသော၊ဖေါက်သည်ကို မဆုံးရှုံးစေသော ဖြေရှင်းမှုများသည် ဝန်ထမ်းကောင်းတို့၏ အရည်အချင်းများပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဖောက်သည်၏ကျေနပ်မှုကို ရရှိစေသောဖြေရှင်းတတ်သူဝန်ထမ်းကို ပိုင်ရှင်များ၊ အကြီးအကဲများက တန်ဖိုးထား ချီးမြှင့်မြှောက်စားလေ့ရှိသောကြောင့် ဝန်ထမ်းကောင်းသည် ပြဿနာမည်မျှကြီးထွားစေကာမူ တည်ငြိမ်မှန်ကန်စွာဖြေရှင်းတတ်သူတစ်ဦးဖြစ်ရန်အတွက် အထူးလိုအပ်ပါသည်။
(၆) မပျင်းရိပါနှင့်။ အလုပ်ကိုသာတိတ်ဆိတ်စွာလုပ်ပါ။ (Don't drag your feet. Be quiet and work.) ဝန်ထမ်းတော်တော်များများသည် မိမိအနေဖြင့် ဤမျှလုပ်ပြီးသဖြင့်ရသည့်လစာနှင့်တန်ပြီဟု သဘောထားသူများကြသည်။ အချို့မူကား ပျင်းရိလေးကန်စွာဖြင့်လည်းကောင်း အလုပ်လုပ်ရင်း အခြားမသက်ဆိုင်သော ထွေရာလေးပါးစကားပြောဆိုခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း အချိန်ကိုကုန်လင့်စေ ကြပါသည်။ ဤအပြုအမူများသည် လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှု၏ အတားအဆီးများဖြစ်သဖြင့် ဝန်ထမ်း ကောင်းဖြစ်လိုသူများသည် လုံးဝရှောင်ရှားရမည်ဖြစ်ပါသည်။
(၇) အမြဲလုပ်ငန်းတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ပါ။ (Be productive.)
အချို့ဝန်ထမ်းများသည် စာရွက်ပေါ်တွင် မိမိ၏လုပ်ငန်းကိုကြာကြာထားလေ့ရှိကြပါသည်။ အေးအေးဆေးဆေးမှ လုပ်မယ်၊ မနက်ဖြန်မှလုပ်မယ်စသည်ဖြင့် နေ့ရွှေ့ညရွှေ့လုပ်ကြသဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်တွင် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုများ လေလွင့်ဆုံးရှုံးမှုများ မဖြစ်သင့်ဘဲဖြစ်ကြပါသည်။ ဝန်ထမ်းကောင်းတစ်ဦးသည် မိမိလုပ်ဆောင်ရမည်ကို ချက်ခြင်းပြီးမြောက်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ထပ်မံလုပ်ဆောင်ရမည့်တာဝန်အတွက် အသင့်ရှိနေရမည်ဖြစ်ပါသည်။
(၈) သင့်တင့်လျောက်ပတ်သောဝတ်စားဆင်ယင်မှုရှိပါစေ (Dress appropriately at job.)
ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် မိမိနှင့်သက်ဆိုင်သော ယူနီဖောင်း (သို့မဟုတ်) သင့်လျော်သော ဝတ်စားဆင်ယင်မှုပြုရပါမည်။ လုပ်ငန်းခွင်နှင့် မအပ်စပ်သောဝတ်စားဆင်ယင်မှုသည် မိမိ၏လုပ်ငန်းအပေါ်တွင် အနည်းနှင့်အများ ထိခိုက်မှုရှိစေပါသည်။ သတ်မှတ်ထားသော ဝတ်စားဆင်ယင်မှုကို သွေဖီခြင်း၊ လွန်ကဲစွာ မိမိကိုယ်ကိုပြင်ဆင်လာခြင်းများကြောင့် မိမိ၏သိက္ခာသာမက ကုမ္ပဏီ၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုလည်း ညှိုးနွမ်းထိခိုက်နိုင်သဖြင့် ဆင်ခြင်ထိန်းသိမ်းရန်အထူးလိုအပ်လှပါသည်။ အထူးသဖြင့် လူငယ်ဝန်ထမ်းများသည် ဆံပင်ကို လွန်ကဲစွာအရောင်ဆိုးခြင်း၊ ခေတ်ပေါ်ဆံပင်ဒီဇိုင်းများပြုလုပ်ခြင်း၊ လျှပ်ပေါ်လော်လီသော မလုံတလုံအဝတ်အစားများဝတ်ဆင်ခြင်းတို့ကို ရှောင်ကြဉ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
(၉) မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုဖြင့်မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ပါ။ (Hold your head high and be confident.) ဝန်ထမ်းကောင်းတစ်ဦးဖြစ်ရန် ယုံကြည်ချက်သည် လွန်စွာအရေးကြီးပါသည်။ မည်သည့်တာဝန် ပေးချက်ကိုမဆို အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်ရမည်ဟု ယုံကြည်ချက်ထားရှိလုပ်ဆောင်ပါက ရာနှုန်းပြည် အောင်မြင်မှုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ မိမိကိုယ်ကို မယုံကြည်ခြင်း၊ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်ခြင်းများသည် မိမိ တာဝန်ယူရသည့်လုပ်ငန်းအပေါ်များစွာ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပြီး လွဲချော်မှားယွင်းမှုများကို ကြုံတွေ့နိုင်သဖြင့် ဝန်ထမ်းကောင်းတစ်ဦးအတွက် မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုသည်အရေးကြီးပါသည်။
(၁ဝ) ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဖုန်းပြောခြင်းဖြင့်အချိန်မဖြုန်းပါနဲ့။ (Don't spendalot of time on personal phone calls.)
ယနေ့ခေတ်တွင် ဆက်သွယ်ရေးစနစ်လွန်စွာတိုးတက်လာသဖြင့် လူတိုင်းလက်ကိုင် ဖုန်းကိုင်ကြသည်။ အချို့လုပ်ငန်းခွင်များတွင် လက်ကိုင်ဖုန်းပြောဆိုခြင်းကို တားမြစ်ထားသော်လည်း အချို့တွင် တားမြစ်ခြင်းမရှိသဖြင့် အရေးပေါ်အခြေအနေမှလွဲ၍အလွန်အကျွံဖုန်းပြောဆိုခြင်းကို ရှောင်ရှားသင့်ပါသည်။
(၁၁) သည်းခံခွင့်လွှတ်ခြင်းသည် အောင်မြင်မှုသော့ချက်ဖြစ်သည်။ (Endurance and Acceptance is the key.)
နားလည်ပေးခြင်း၊ သည်းခံခွင့်လွှတ်ခြင်းသည် တစ်ဖက်တိုက်ခိုက်မှုကို ပြန်လည်တုန့်ပြန်ခြင်းမရှိဘဲ အောင်မြင်စေသောနည်းလမ်းဖြစ်သဖြင့် ဝန်ထမ်းကောင်းတစ်ဦးအနေဖြင့် လိုက်နာကျင့်သုံးသင့်ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်စေမန်နေဂျာဖြစ်စေ၊ ပိုင်ရှင်ဖြစ်စေ၊ မှားနေစေကာမူ မိမိအနေ ဖြင့် ငြင်းဆန်ပြောဆိုနေခြင်းထက် သည်းခံပြီး အချိန်အခါသင့်မှ ပြန်လည်ရှင်းလင်းပြောဆိုခြင်းဖြင့် မိမိအပေါ် နားလည်ချစ်ခင်မှုကို ရယူနိုင်သဖြင့် ဝန်ထမ်းကောင်းတို့သည် သည်းခံခွင့်လွှတ်တတ်သောစိတ်ဓာတ်ကို မွေးမြူသင့်ပါသည်။
ဖော်ပြပါအချက်များသည် အကြမ်းဖျဉ်းတင်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ ဝန်ထမ်းကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်လာရန်အတွက် အသေးအမွှားကအစ အလေးထားပြီး ဆောင်ရွက်သင့်သကဲ့သို့ ပိုင်ရှင်များ၊ သူဌေးများ အုပ်ချုပ်သူမန်နေဂျာများသည်လည်း နှစ်ရှည်လများ ပြုစုမွေးဖွားထားသော မိမိတို့၏ဝန်ထမ်းကောင်းများ မဆုံးရှုံးစေရန် တစ်ဖက်ပြိုင်ဘက်လုပ်ငန်းရှင်များလက်သို့ ရောက်ရှိမသွားစေရန် အထူးဂရုပြုသင့်ပါကြောင်းရေးသားလိုက်ရပါသည်။ ။